के हुन्छ निदाउनु अघि मोबाइल चलाउँदा ? - Purbeli News
के हुन्छ निदाउनु अघि मोबाइल चलाउँदा ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २७, २०७७ समय: २०:१९:००
जब यो सर्काडियन रिदम (circadian rhythm) बिग्रन्छ तब निन्द्राको समयमा शरिरमा उत्पन्न हुने मेलाटोनिन नामको हर्मोन उत्पादनमा दख्खल पुग्छ। जसले निन्द्रा अनियमित बनाइदिन्छ।
यी इलेक्ट्रोनिक डिभासबाट निस्कने छोटो वेभलेन्थको कृत्रिम निलो प्रकाशको कारण शरीरको यो आन्तरिक घडीमा असर पुगेको हो।
बेलुकाको समयमा जति बढी यस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गरिन्छ, त्यति नै निदाउन गाह्रो हुन्छ, छोटो निन्द्रा पर्छ।
सुत्नु पर्ने समयमा नसुत्दा रेम चरणको निन्द्राको अवधि घट्छ। जसको कारण बिहान उठ्दा शरिरमा आलस्यता आउँछ, शरिरले पुरा आराम पाएको हुँदैन। (REM- Rapid Eye Motion- यो निन्द्राको गहिरो चरण हो, जसले शरिरमा ताजगी फिर्ता ल्याउन मद्धत गर्छ, साथै यही चरणमा सपना देखिन्छ। त्यसैले यो बेला व्यक्तिको आँखा चलिरहेको देख्छ सकिन्छ)।
यो बानी हटाउन बेलुका सुत्नु अघि किताब पढ्ने बानी सुरु गर्न सकिन्छ। यसले निन्द्रा लगाउन पनि मद्धत गर्छ अनि ज्ञान पनि पाइन्छ।
अर्को प्राविधिक उपाय पनि छ, किन्डल। इलेक्ट्रोनिक उपकरण नै भएपनि किन्डलमा किताब पढ्दा यसले अन्य उपकरण जस्तो हानी गर्दैन, किनकी यसले मोबाइल, ट्याबलेटहरु झै कृत्रिम निलो प्रकाश निकाल्दैन।